डचटाउन चलचित्र नाइट मार्क्वेट पार्कमा • डचटाउनस्टाइल.आर.आरओ • डचटाउन, सेन्ट लुइस, MO
डचटाउन चलचित्र रात मार्केट पार्क
प्रकाशित जुलाई 17th, 2020
अर्को डचटाउन चलचित्र रात जुलाई २th, शनिबार आउँदैछ! यस पटक वरपर, हामी एनिमेटेड साहसिक देखाउँदै छौं भेषमा जासूसहरू विल स्मिथको आवाज प्रस्तुत गर्दै।
कार्यक्रम साँझ :7: .० मा सुरु हुन्छ। तुरुन्तै पहाडमा आफ्नो स्पॉट दावी गर्न आइपुग्नुहोस्! हामीसँग खाना ट्रक, सामुदायिक गतिविधि, र अधिक हुनेछ।
फिल्म फिल्ड हाउसको अगाडि पहाडमा inflatable २२ फिट ठूलो स्क्रिनमा प्रोजेक्ट हुनेछ। बस्नको लागि कुर्सी वा कम्बल ल्याउनुहोस्। एक पटक यो अँध्यारो हुन्छ (लगभग :22::8० तिर), हामी चलचित्र सुरु गर्नेछौं।
तपाईंको परिवार र साथीहरू र छिमेकीहरूलाई यस रमाईलो, परिवार-मैत्री घटनाको बारेमा बताउनुहोस्! मा जानुहोस् फेसबुक घटना पृष्ठ मानिसहरूलाई साझेदारी र आमन्त्रित गर्न। यस गर्मीमा अधिक चलचित्र रातहरूको बारेमा जानकारीको लागि, जानुहोस् dutchtownstl.org/movienight वा हामीलाई पछ्याउनुहोस् फेसबुक, twitter, र इन्स्टाग्राम.
२०२० डचटाउन फिल्म नाइटहरू प्रायोजित हुन् AB InBev, DT2 ow डाउनटाउन डचटाउन, डचटाउन समुदाय सुधार जिल्ला, डचटाउन साउथ कम्युनिटी कर्पोरेशन, जीन स्लेको केटीहरू र सेन्ट लुइसको केटाहरू क्लब, मानवता सेन्ट लुइसको लागि आवास, लुथरन विकास समूह, मूल क्रूसो भोजनालय, पादुआको सेन्ट एन्थोनी, थॉमस डन लर्निंग सेन्टर, र टावर ग्रोव छिमेकी समुदाय विकास निगम.
तल दायर गरिएको मार्क्वेट पार्क. सबै कोटीहरू देखाउनुहोस्. DT2, डचटाउन, डचटाउन कार्यक्रमहरू, र मार्क्वेट पार्क. कम कोटीहरू देखाउनुहोस्.
यस पोस्ट साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पोष्ट अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो जुलाई 17th, 2020 .
DutchtownSTL.org मार्क्वेट पार्क डचटाउन चलचित्र रात मार्केट पार्क